မြိုင်ပေနက်ရေနံအစမ်း တွင်းအမှတ်(၁) ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တူးဖော်မည် တစ်နေ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သုံး? - Yangon Media Group
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသည့် မြိုင်ပေနက် ရေနံအစမ်းတွင်း အမှတ်(၁)ကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် စတင်တူးဖော်မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်စွာ တူးဖော်စမ်းသပ်ပြီးပါက တစ်နေ့လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ သုံးသန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားကြောင်း မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ဒုတိယဦး ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဥာဏ်ထွန်းက ပြောသည်။ အဆိုပါ ပြောကြားချက်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က နေပြည်တော်လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွင်ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဥာဏ်ထွန်းက မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတွေ့ ရှိနိုင်ဖို့အတွက် ရေနံအစမ်းတွင်းများ တူးဖော်ထားခြင်း မရှိသေးတဲ့ မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာ မြိုင်ပေနက် ရေနံအစမ်းတွင်း အမှတ်(၁)ကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် စတင်တူးဖော်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ မြိုင်ဒေသအတွင်း ပေနက် အစမ်းတွင်း တူးဖော်နိုင်ရေးအတွက် Risk များ လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ဘူမိရူပဗေဒ Seismic တိုင်းတာ ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မြေပေါ်ဘူမိဗေဒ ကွင်းဆင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အတွင်းမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး Seismic မှ Prospect Map များ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မ ကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ်အတွင်း မြိုင်ပေနက် ရေနံအစမ်း တွင်း အမှတ်(၁)အား ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် စတင်တူး ဖော်မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်စွာတူး ဖော်စမ်းသပ်ပြီးပါက တစ်နေ့လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သုံးသန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြိုင်ပေနက် ရေနံအစမ်းတွင်း အမှတ်(၁)သည် ချင်းတွင်းအနည်ကျ ချိုင့်ဝှမ်း၏ မြိုင်လွှာတွန့်ခုံး (Myaing Anticline) ၏တောင် ဘက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိကြောင်း၊ မြိုင်ဘူမိ အနေအထားသည်ပြတ်ရွေ့ ပါဝင်သော လွှာတွန့်ခုံးတစ်ခုဖြစ် ပြီး လွှာတွန့်ခုံး၏ အလယ်တွင် ပုံ တောင်ကျောက်စဉ်စု ပေါ်ထွက်နေ ပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တည်ရှိနိုင် သော တဗျင်း (Tabyin) ကျောက်စဉ်စုသည် အနက်ပေ ၃ဝဝဝ – ၆၅ဝဝ ခန့်တွင် တွေ့ရှိစမ်းသပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အစမ်းတွင်းကို တွင်းတူးစက် ZI 70L . SR – 1 (တူးဖော်နိုင်သည့် အနက်ပေ ၁၅ဝဝဝ) ဖြင့် အနက် ပေ ၈၅ဝဝ ထိ ခန့်မှန်းတူး ဖော်ရက် ၁၄ဝ ရက်နှင့်တူးဖော်မည်ဖြစ်ပြီး Supra Thrust Lower Pondaung, Tabyin ကျောက်စဉ်စုနှင့် Supra ThrustTabyin ကျောက်စဉ်စု၏ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလားအလာကို တူးဖော် စမ်းသပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မြိုင်ပေနက် ရေနံအစမ်းတွင်း အမှတ်(၁)ကို အောင်မြင်စွာ တူး ဖော်စမ်းသပ်ပြီးပါက တစ်နေ့လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သုံးသန်းထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်း၊ အဆိုပါတွင်းမှ ပေ ၂ဝဝဝ စီခန့်ခြား၍ Appraisial Well နှင့် Development Well များ ၁၁ တွင်းခန့် ဆက်လက်တူးဖော်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရရှိထားသော ဘူမိရူပ ဗေဒ ကွန်တိုများအရ ရေနံ၊ ဓာတ် ငွေ့ထွက်ရှိပါက Recoverable Reserves 82 BCT ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိ ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောများပေါ်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီး Seafarer များ တရားဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး
Nature သိပ္ပံဂျာနယ်က ယခုနှစ်အတွက် အရေးပါဆုံး သိပ္ပံပညာရှင် ၁ဝ ဦးကို ရွေးချယ်ဖော်ပြ
၁၆ မှတ်အထိ ဖြတ်ထားနိုင်သော်လည်း ချန်ပီယံ မဖြစ်သေးဟု အလီဂရီ ဆို